Makore makumi mashanu ezvikanganiso zve geostrategic nevatungamiriri vemu Africa - Afrikhepri Fondation
Makumi mashanu emakore geostrategic zvikanganiso nevatungamiriri vemuAfrica
Kuverenga: 15 mins
L 'Nhoroondo inoramba ichiti Chibvumirano cheRome chinomisa European Economic Community chakasainwa musi waKurume 25, 1957. Izvo zvisingawanikwe mumabhuku enhoroondo ndezvekuti siginecha iyi yakatanga kurongerwa Kurume 21, 1957 uye kuti yakamiswa kwemazuva mana. Ehe, mabhuku enhoroondo (ese akanyorwa nevaEuropean) haagari pane izvi, asi zvakakosha kwazvo kumuAfrica. Saka tinofanirwa kuchera mundangariro dzakasiiwa nevamwe vanhu vaivepo pamhemberero iyi kuti tione kuti zuva rakamiswa nemazuva mana nekuda kwebhanana. Hongu, ndinoziva zvinogona kukunyemwerera, asi zvakakomba. Nekuti ndiko kutanga kwechirongwa chepasirese chine chinangwa chekusimudzira hupfumi hwenyika, kunyangwe kupfuura kuzvitonga kweAfrica.Zvakatora mazuva mana ekutaurirana kuti vaone kuti hupfumi hwemari hwenyika, mukushandira dzimwe nyika hungashingirira kunyangwe mubatanidzwa mutsva mukusika. MuItaly, pakanga paine hutongi hwehurumende pamabhanana kubva kukoloni, Somalia, uye muFrance kubvira 4, pakanga paine boka revashandi rekupa nyika mabhanana kubva kumakoroni mashanu: Cameroon, Ivory Coast, Madagascar, Martinique uye Guadeloupe.
Bhanana inoratidzwa kubva kuChibvumirano cheRoma sechinhu chinodzora geostrategic pamusoro peAfrican States, kunyange rusununguko rwavo rusati rwagamuchirwa nevavakauraya. Uye nekuti muna 1960, France ichasungirwa kuziva rusununguko rwekutanga nyika nhatu, zvese zvichaitwa kuitira kuti ivo vagari veFrance vakasara munzvimbo idzi dzekoloni vatore bhanana, vachitungamira vanhu veko zvirimwa zvishoma zvisingabatsiri zvakadai sekotoni, kofi uye cocoa. Tichaona kuti sei.
A- Iyo inobatsira yebhanana
Bhanana uyu muchero unobatsira kwazvo pasi nekuti unokohwewa vhiki nevhiki uye unoitwa gore rese. Goho rayo rinoshanda rinowedzera kubva pamatani makumi maviri pahekita imwe yemabhanana ehupenyu muSenegal zvinoenderana nenhamba dzakapihwa nesangano revatengi reAPROVAG APROVAG, Tambacounda muSenegal, kusvika kumatoni makumi matanhatu pahekita imwe mumahombekombe eMoroccan, maererano nenhamba dzakapihwa. neAgronomic uye Veterinary Institute Hassan II weRabat muMorocco. Mukuenzanisa, cocoa yakaburitswa pahekita mazana matatu makirogiramu, maererano nenhamba dzakapihwa neCNRA, National Center yeAgronomic Research yeCôte d'Ivoire, yakaziviswa naVaLancine Bakayoko musi wa20 / 60/300, ndiko kuti -kureva kuti nekuda kwesarudzo dzakashata dzevacorist vezvematongerwo enyika uye vezvematongerwo enyika, kubva pseudo-kuzvimiririra, murimi wecocoa weIvorian murombo kakapetwa ka27 kupfuura murimi webhanana weMoroccan. Zvakatoipisisa zvekofi. Sekureva kwechidzidzo chakakomba chakaitwa ne IRCC iyo Kofi neCocoa Research Institute yeCôte d'Ivoire, pakati pa10 na2009, tinowana munzvimbo yeGagnoa avhareji inorema ye200 kg yekofi pahekita. , kureva kuti vezvehupfumi veIvorian uye vezvematongerwo enyika vachiziva vakadzikisa varombo kusvika pahurombo kakapetwa ka1969 kupfuura vamwe vavo, varombo veMoroccan. Tichawana mamiriro akafanana zvakafanana pese pese mu sub-Saharan Africa.
B- Iyo geostrategy yebhanana
yakapihwa naLe Monde Diplomatique muna Gumiguru 1996, naGhislain Laporte, matani mamirioni makumi mashanu nemaviri akagadzirwa muna 52 (matani miriyoni zana muna1996). Uye ivo vaviri vagadziri vakuru, India neChina, vakapedza zvese zvavo zvigadzirwa. Izvo zvakasara mamirioni gumi nematatu ematani pamusika wepasi rose uyo mamirioni mana ematani akaenda kuEuropean Union. Uye iyo 100/2011 inodzorwa nemaviri American nyika, United Brands Company (Chiquita brand) uye Castel & Cooke (Dole brand), uye Mexican: Del Monte. Zvinosemesa pamusoro pezviyero izvi zvinhu zviviri zvakakosha: 11- Nyika dzese makumi manomwe neshanu dzinonzi ACP (Africa, Caribbean nePacific) nyika idzo European Union inobata mukana usingarambwe negungano reLomé, Cotonou, zvisingaite zvakapetwa kaviri (4 matani) ezvidiki zveSpanish Canary Islands (2 tonnes). Kazhinji kanokwana kana kupfuura iyo Martinique diki, iine 3 km1 uye 79 vagari vakapa EU matani mazana maviri nemazana maviri emabhanana, vachipesana ne 857.000 mamirioni eSub-Saharan Africa (420.000 manhamba).
2- Zvakaipisisa, kuwanda kwenyika ye79 ACP chikamu chimwe chete muzvitatu zvehuwandu huchiendeswa kuEuro neSouth America, iyo isingabatsiri pamagungano akafanana, kureva 2,5 mamiriyoni matani.
Hunobuda kubva izvi 2 pfungwa, kuda kutendeuka Africa zvinobatsira nezvinobvamo zvakafanana mabhanana kuti ichi sezvo evasingatombonamati ichitongwa pfungwa (kunyange pamusoro 50 makore ruremekedzo West African rusununguko), nzvimbo kubudiswa muvhu reAfrica, chete kune vekuMadokero.
Kukanganisa vatungamiri African kugara ichi yaitonga pfungwa kudavira kuti pane chimwe chokwadi kuti nyika pane uya aizouya kubva European Union uye izvo zvaizoita zvachose passivity, muchitenda iye n ' iripo semusika weEU. Kuti anesthetize passivity ichi yakasvika Non Governmental Organisations (NGOs) vanoti zvipenyu izvo touted kukurumidza nokuponesa African dondo, asi ane basa chairo kuti zviite Africans kubva nokushanda nzvimbo iyi zvinokosha pakusikwa kweminda yezvipembenene zvisingaverengwi zvebhanana zvinogona kuvhiringidza bhizimisi rebhanisi rinobhadhara pamusika wepasi pose uye kuvimbisa hurumende yakakwana yeAfrica. Uyu muenzaniso webhanana ndiwo chiratidzo chechiitiko ichi chakasvika mukupikisana kwenyika dzakadai sene Senegal izvo zvisingakanganisi mazviri mukati mazvo kubhengwa kwebhanana kuti vaudze.
C- Nei bhanji?
Masangano akawanda ekutsvakurudza ari pamwe chete pamusana pezvinhu zvakasiyana zvezvibereko zvinowanikwa mubhanana weminwe yemunwe:
Akapfuma mu potassium, bhanana imishonga yeropa Izvo zvinoratidzwa zvakare mune izvo zvinonzi zvakasarudzika mamwe mushonga kurwisa mudumbu ulcer, manyoka. Akapfuma mu iron, mabhanana anomutsa kugadzirwa kwehemoglobin, iyo inobatsira kudzikisa kupererwa neropa. Mabhanana ane vhitamini B6, iro basa ndere kudzora glucose muropa.
Kunyange pasina kunze kwenyika, Africa inofanira kunge yakagadzira shanduko yakakura yevatengesi vechibhanana, nokuti chii chinoita kuti chibereko ichi chive chakakurumbira ndechepamusoro-soro yevhitamini C uye imwe-mining ration. bhasika zuva rega roga raizokwana kuti riwane vitamini C zvinodiwa zvevana veAfrica. Uye kune misika huru muAfrica pachayo, inopa huwandu hwevana vaduku uye kudiwa kwamavhitamini.
D- Ihwo uhu hwevanhu veAfrica huripo here?
Mune 55.000 matani mabhanana anotengeswa munyika yose muna 2010, 40% zvakabudiswa muAsia, 27% kuSouth America uye 13 chete% muna Africa. Pano ndiyo iyo inonzi dessert banana, kureva kuti, bhanana inodyarwa sezvibereko, bhanki rakaruka. Asi maererano nenhamba yakapiwa FAO, muna 1995 yakanga yabudisa munyika 24.000 matani yokubikira mabhanana Green akati, 17.000 matani zvakabudiswa muAfrica, kureva 71 uye 4.000% matani mu South America , iyo 17%. Saka tinogona kuona kuti kana Africans regai pave 13% wenyika mabhanana, hazvisi nokuda nourema kwavo asi pfungwa dzavo passivity kurapo zvoupfumi zvido West kubva kuti ndezvekubata nemusika; asi kwete yavo, kubva pazvinouya pakuchengetera zvokudya, kana zvasvika pakugutsa kuponesa kwepanyama, vakarova zvinyorwa zvenyika yose. Saka isu tinogona kutaura kuti uropi hwevaAfrica hunoratidzika husina simba kana zvichiuya pakutengesa kutengesa, kutengesa kunze kweEuropean Union. Vari ipapo kukutendai zano nokungwara sizvo kuti lavishes European Union, ndiko kutaura mwoyo kubereka mabhanana kuti kumusika kutoti zviri zvizere kutongwa makambani Western yakaiswa muAfrica.
Mu 2007, 65% yebhanana yakatengeswa pamusika wepasi rose yakabva kunyika mbiri dzaimbova mabhizimisi ekofi uye zvose zvakaparadza minda yehafi iyi yakasakara, kuchinja kune bhanana uye ndiyo Colombia Costa Rica. Ndicho chakaita kuti 10 ishambare yebhanani yakakura munyika yose, 7 yaibva kuSouth America, ichibvumira chikamu ichi chepasi kutonga 95% yebhanana yakatengeswa kunyika. nyika. Zvichakadaro, vaAfrica vakanga vachigadzirira kupemberera makore e50 ekuzvimirira, asi vachiri kutambura kuti vabvise murairo wekoloni kuti vabate chete nekofi, cocoa nekotoni, chimwe chibereko chakashata chakabatana kubudiswa kwevaAfrica kuAmerica munguva ye4 kwemazana emakore.
Muna 1978, Morocco yakasarudza kurambidza basa rekupinza mabhanana. Mambo akange angonzwisisa kuti bhanana raigona kuve chishandiso chegeostrategy mumaoko ehumambo. Uye kunyangwe paine mamiriro ekunze asina kusarudzika senge (kusiyana neCongo kana Kameruni), Mambo anosarudza kugadzira dzimba dzekuchengetera dzakashongedzerwa uye dzakagadzirira kuburitsa nezvikamu zvidimbu zve 1,53 mahekita akahayiwa pamutengo unoseka kuvagari vayo. Moroko, iyo yakaunza kunze zviuru makumi maviri nezvina zvematani emabhanana gore rega rega muna 24.000, kubva 1978 kuenda mberi inokwanisa kuzadzisa kudiwa kwayo kwemukati padanho risati rarambidzwa. Sekureva kweshumo rakaburitswa nevaporofesa vatatu: Skiredj, Walali uye Attir weAgronomic neVeterinary Institute Hassan II weRabat, kubva kumahekita maviri pakutanga kwegore ra1982 / 3, takaenda kumahekita 2 1980 muna81 nema2.700 1996 mahekita mugore ra3.500. , Ine kugadzirwa kwegore negore kunopfuura zviuru zana zvematani emabhanana
Nzira yekuenderera mberi inofanira kunge yakazara uye mu 3 mazano:
1- 40% yebhanana yakabudiswa muAfrica rots nekuda kwekushaiwa kwemisika. Kuzogadzirisa ichi munobuda sezvo hatina MuMorocco kukurudzira uye kuronga mudzimba pamusika zvakanyatsorongwa kuunganidza zvose dhizeti mabhanana dziripo vaburitsi duku kuramba ichiibvira mabhanana izvo buda kuibva muhuwandu zvinoenderana pakukumbira kwemukati wemusika.
2- Dhemocrates kuburitsa kwebhanana nekusika mapurusi maduku eminda. Iyi ndiyo nzira chete yekuparadzanisa nemitemo yekoloni yeminda yebhanja yeuranda iripo nhasi, kwete muAfrica chete, asiwo kuMartinique neGuadeloupe uko tsika yebhanana yakasimba uye chete mumaoko emazera eimbova varanda.
3- Kuti uite, unofanirwa kuziva kutengesa. Misika yemakwikwi yenyika dzakawanda sematayini anopindura mazano chaiwo kunyika imwe neimwe, chigadzirwa chimwe nechimwe. Mumwe anofanirwa kunge ane unyanzvi hwepfungwa kuti anzwisise kuti nyika haigumi kune nyika dzeEurope zvoEurope, kunyange dzikave dzakapfuma. Kune nzvimbo yakakura zvikuru yekugadzirwa kwebhanana munyika dzakawanda dzakadai seRussia, Iran, Turkey ne ...
Kune musika wemuAfrica wemukati wekutora, asi kuti usvike ipapo, unofanirwa kukurudzirwa uye kugadzirwa kuti uugutse. Kuti udzivise musungo wevatambi venyika dzakawanda mubhanana, zvinongoda kuti utongi hwebhanana huve nehutongi nemarongero madiki asingadariki mahekita mashanu uye pamusoro pezvose, iva nechokwadi uye uve nechokwadi chekuti varidzi ndivo chaivo vanoshanda zuva nezuva mune izvi minda. Izvi zvinodzivirira dambudziko rinogumbura rekufungidzira kwepasi ratinoona mune dzimwe nyika uko zvizvarwa zvemo zvichizora maoko nekuita varanda kubva kumwe kunoshanda, sekuCôte d'Ivoire kunyanya. Mushandirapamwe unofanirwa kusanganisa chete varimi chete vari muchirongwa ichi, uye ndiye achafanirwa kuve nebasa rekupa varimi mabhanana ekutanga kuvarimi. Ndipo ipapo izvo zvinofanirwa kuve zvine chekuita nekudzora kwemhando yepamusoro uye kutevedzera zviyero zvepasi rose zvegasi uye zvekufambisa zvemugungwa, kutanga kufukidza musika wenyika uyezve wepasi rose.
Nhasi, rubatsiro rwebhanana riripo mukuparadzirwa. Hapana hurumende ichazadzikiswa uye inobudirira kuita kuti varimi vedu vabve mukutambudzika kwekofi, cocoa nekotoni kana zvisingafungi kudiwa kwekugadzira murals zvakananga mumaguta makuru enyika dzedu kuitira kuti tive nemhando izvo zvinonzi "vertical" concentration. Iko pamutengo uyu uyo ​​uchakwanisika kuvhara humwe utera hwakakosha hwekushaya kukwikwidzana kwebhanana reAfrica, kwenguva yakareba yakaramba iri mukutaura kwepasi rose rekudzivirira kwepasi rose reAfrica neveEurope. Kuvhara maonero ekukanganiswa kwemazana emabhanki emazuva ano, zvichange zvakafanira kusvika pane kuchinja kune avo vaduku vadzidzisi uye kudzivisa kushandiswa zvakananga nemakambani ekudarika. Iko pamutengo uyu watichawana kugoverwa kwechokwadi kwekudonha kwezvibereko zvepasi zvakadyiwa, bhanana. Izvi zviri kutoitika kune dzimwe nyika kuSouth America apo, kusiyana neAfrica, hurumende dzakataurirana kuti dzimanikidzire makambani evanhu vari munyika kuti varege kuzvigadzira ivo, uye kutenga mabhanana avo ebhanana zvakananga kubva kune varimi. .
Muenzaniso wekambani ye APROVAG (sangano rekugadzira, Tambacounda) muruwa rweMisrarah muSenegal, rinoratidzika kufadza kuratidza uye kuchinja kune imwe nzvimbo muAfrica. Vakaronga ivo pachavo kuti vatsaurire 16% yenyika yavo, kureva 0,25 ye 1,63 hectares yemurimi umwe neumwe, kubhanana
huwandu hwe250 hektares yakazvipira kukura bhanana, kuva nemari. In 2008, kugadzirwa raiva 5.000 matani (ane kurasikirwa 20% nokuda kwokushayiwa ichiibvira uye 5% ufungisise varimi pachavo), kuti pamwe akaita vakatengesa 4.000 matani mabhanana, pokuziva chiduku Bonanza 640.000.000 CFA (€ 975 760) nokuda kwevanhu ichi musha vanofungidzirwa kusvika 52 845 vagere, uye mambure purofiti kumucheto: 1 561 000 CFA paminiti hectare mumaruwa munharaunda 3: Missirah, Dialacoto uye Netteboulou. pamwe ichi akasarudza penalizing vakaomerwa ayo negoho 20 matani por hectare, kudzivirira utano nhengo dzayo, uyo takarasha kwemakemikari fetiraiza inova huru kunobva kusafara munyika dzinonzi maindasitiri mabhanana rabha.
Kukura uye kuchengetedza:
Bhanana uyu unonzi muchero wemamiriro ekunze, ndiko kuti kuibva kwawo kunogona kudzorwa kudzikisa kurasikirwa, uye kugadzirisa kushambadzira kwayo, nekuda kweacetylene kana ethylene, zvigadzirwa zve petrochemical indasitiri, inowanikwa kubva mugesi. Mabhanana anounganidzwa kubva kuvarimi vadiki anofanirwa kuchengetwa ipapo muzvitoro zvinotonhora zvinodaidzwa kuti "makamuri ekuibva". Ikoko, vanorapwa neacetylene pane chaiwo chaiwo tembiricha uye mwando kubva 18 ° C kusvika 14 ° C mumazuva mana ekukura kana kugadzikana pa4-6 ° C yekuchengetedza.
G- ACP-EU kusabatanidzwa kusina kukodzera kumusana wekolonial
50 makore mushure mekuzivikanwa neveEurope yekusununguka kwenyika dzinoverengeka dzeAfrica, nguva ingangodaro yakauya kuzoita rusununguko runoshanda. Nhasi, nyika dzeExNUMX dzeAfrica dziri mumamiriro ezvinhu ekugadzikana kwepfungwa, zvisingatauri pachena nezvemuenzaniso webhanana. Africa inofanira kuva neushingi hwekubuda kubva pakuyaruka kuburikidza nokutora chisarudzo chisina kukodzera chekushanda pamwe nekuzivisa European Union kuti iri kupedzisa zvese zvakasungirwa kuti zvigadzirise uye zvigare muuranda . Muenzaniso mukuru kwazvo ndeye boka rakakurumbira rainzi ACP (Africa Caribbean nePacific) iro riri kurarama huchapupu hwekuti ukoloni hahuperi uye nechikonzero chakanaka:
1 - Havasi vaAfrica vakatora chiito chekusika kwayo. Icho chinoreva kuti boka rakadaro raigona kunge rakarangarirwa nevaEurope kuti vatarise zvinodiwa zveEurope. Uye kungofunga kuti ivo vakazviita nokuda kwevanhu veAfrica zvinotonyanya kunyomba kuhuchenjeri hwekupedzisira. Chero mamiriro ose ezvinhu, mufananidzo weAfrica unobuda zvachose mumatters.
2- Zviri kanganisika kuti 46 SSA nyika vanobatanidzwa chero hurukuro pamwe European Union, dzakakudzingai kunyika North Africa, kunyange zvazvo European Union Hwabatanidza zvose zvisinei musoro wepikisano, chero ipi zvayo.
dzimbahwe 3- The CPA muna kweBrussels, uye kuti 100% mari ne European Union, riri zvachose zvaasingadi Pakuurayiwa chiratidzo chete, nokuti nyika kuti vanotenda pachavo kuzvimirira kwemakore anopfuura 50 makore . Kana ACP iyi yaive kune nyika dzakabatanidzwa, nei uchirondedzera kuti chigaro hachisi mune imwe yenhengo dzenhengo dzomutemo uyu? Chii chinoitika kana zvido zvake zvakasiyana nemamwe eEuropean Union? Ichokwadi chiri chakaipa uye ndeyekuti vatongi veAfrica vanobatana nechekuita sangano iri, vanotenda vakatendeseka uye naively kuti vanogona kuita basa ravo kuti vagadzire, kutanga matanho ekugadzira mufaro uye kubudirira kwevanhu vavo. Ikuremekedzwa kupi mushumiri weAfrica anonzwa paanogara uye achidyiswa pamutengo weEuropean Union? Icho chimiro chechokwadi cheupfumi hwekuchenjera hwemaAfrica.
4- Kana iri mu1973, United Kingdom inosangana neEuropean Union makore maviri gare gare, mu1975, kune kuwedzera kwezvishamiso kwenhamba yeAAC nhengo dzenyika. Ichi chishamiso chiduku chinokonzerwa nekuti United Kingdom inounza mapoka ayo emakereke ayo anonzi "Commonwealth". Ichi ndicho chaicho chipupuriro chokuti ACP isangano rekoloni uye inoshanda mupfungwa yakakwana yekoloni, nokuti nyika dzinomerera kune iyo dziri mupfungwa dzevakiki vayo, kana kupfuura kana pasi pevanhu vanoita makoloni. Uye Africa yaizoita zviri nani kusiya.
5- Ecuador asiri nhengo yesangano kuti inopiwa 2011, 40% kuti mabhanana aivigirwa yose, pamwe zvinenge 5 000 000 matani mabhanana dhizeti. Kuti adzivirire iyo inonzi inonzi yakachengetedzwa ACP nokuda kwekutsvaira kwayo kwakakwana kwemusika uyu, European Union yakapa kugoverana ne 79 ACP nyika, denderedzwa ye220 mamiriyoni, kureva mavhareji eE2,70 emamiriyoni ega ega ega. Chii? Kugadzirisa dambudziko ripi? Mystery.
Sangano rekugadzirisa hukama hwepasi pose rakasimbiswa neEuropean Union rakarongedzwa kusimbisa uye kuderedza vashandi vayo kumaodzanyemba kwenyika avo vakagadzirisa saizvozvo muhukama husina kufanana hwechikamu chinotaura nezvechimwe chete inzwi uye rinosarudza nekugadzirisa maererano nechinangwa chayo uye zvido zvayo, vashandi pamwe chete sevasinganzwisisiki seboka re ACP. Africa inofanira kunzwisisa kuti mazana ezviuru zveuranda uye hutsinye hwemhirizhonga hazvibudi kunze kwekuziva kwechokwadi kudiwa kunokosha kwekupfungwa kwepfungwa nezvakaitika kare, kuzvisunungura pachako kune rusununguko. Mishonga yose, kugadziriswa kwose kunonzi ACP kana CEMAC, kana ECOWAS inogadziriswa maitiro ezvo chinangwa choga chiri kuparadzanisa vanhu veAfrica nekudzivirira kubuda kweUnited States of Africa
H- Zvidzidzo zvipi zvevechiduku veAfrica?
youth African vanofanira kukwanisa kubvunza mubvunzo unokosha: nei EU fragmenting yacho African iri kupfuura benzi groupings hairevi pacharo mazano aya, somuenzaniso paakasika boka nyika dzaimbova dzechiKomonisiti EU, boka rezvikamu zve 6 zvakagadzirisa zveEU, boka renyika dzakapoteredza Gungwa reMediterranean reEuropean Union, boka reAtlantic nyika dze EU ??? Dambudziko rezvematongerwo enyika muHest West rinoratidza kuti hakuna nyika yakakwana yakazara kana nyika ine urombo, pane vanhu vakapfuma mukuziva zvido zvavo uye vamwe varombo mune izvi kuziva. Muvengi kondinendi African, kwete European Union, ndicho African murombo mafungiro ava anonyanya kuti anoda kuita kubudikidza Marshal uye ona zvakananga European National Football zvikwata kunyange zvazvo asina kumbobvira akaratidza kupi zvako hutano hwake hwekudzidzira, achitungamirira makambani makuru evanhu vose, kunyange kana mukana wekutsvaga wejaji yeAfrica asina kumbobvira atsigira hutano hwake hwepamusoro kune imwe nzvimbo ... Qu ndizvo zvinogona kururamisa kuti nyika inoramba iri muuranda hwekofi nekocoa nemitambo ye 180 kg pa hektare kukanganwa bhananisi yavanosanganisa, pavanenge vachigona kuona pabhanana imwe zvishoma kubatsirwa kwe20 tonnes per hectare? Hazvina mhosva, kana imwe yeEurope yakati chinhu chakanaka chekuita, hongu, zvichida anofanira kunge akarurama. Sei zvingave zvakasiyana, sezvo baba vake vaine simba pamusoro pangu; sezvo kunyange mwari wake atora huMwari hwaiva madzibaba angu; sezvo chikoro chake chegorosi chakatsiva mari yangu nemafuta, mabhasi, manioc; sezvo mazita ake okutanga akatsiva mine; sezvo rurimi rwake rwakatsiva rangu; sezvo mari yake yakatsiva yangu; sezvo vatungamiri vake vakauraya yangu; saka, sei, angadai asina kukanganisa kana achisarudza ini vatambi vemutambo wangu werudzi? Apo paanosarudza munzvimbo yangu kuti handifaniri kubata musango kuti ndigadzire masimi angu, zvimwe nyika yose inogumbuka nokuda kwekushayikwa kwomweya inobva musango rangu? Iye anonyatsokodzera paanorumbidza zvinokodzera zvekocoa uye anondiraira kuti ndigare ipapo mumutsika wake kuti ndiite mbiri yezvimwe zvepamusoro chocolatiers muBrussels, Paris kana kuVienna. Anonyatsokodzera pane zvose. Kana izvi zvisipo, ini ndiri munhu chaiye here?
Jean-Paul Pougala mugari wemuCameroonia uye Mutungamiriri weInstitute of Geostrategic Study yeGeneva muSwitzerland
Watch United States of Africa (2012)
Kuramba Kosi - Wayne Dyer (Audio)